Latin-burmese translation | HTML Translate | Online Interpres & Dictionary | OpenTran
Vultus parumper officium အလုပ်တစ်ခုရှာနေသည်
Mea die operantes, ငါ့အလုပ်နေ့
Aliquam dolor meus ငါ့ဝါသနာ
Annus novus နှစ်သစ်
Picas gratam Caelesti! ကောင်းကင် Pies မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်!
Amici Dialog သူငယ်ချင်းများဆွေးနွေးပွဲ
In TV တီဗီ
Quomodo In expensis te Gloria mea ငါ့နွေရာသီကိုဘယ်လိုအသုံးပြုခဲ့လဲ
Schola subditos ကျောင်းမှဘာသာရပ်များ
Inter doctor et patientes: ဆရာဝန်နှင့်လူနာအကြားတွင်